Umbane weeNdlebe oza kufika nge-iPhone 7 | IPhone iindaba
Ngaba ezi iya kuba zii-Earpods zombane eziza kufika nge-iPhone 7? [Ihlaziyiwe]
UPablo Aparicio | | Ezahlukeneyo
[IXELisiwe]: Imifanekiso yoqobo (kunye neyokuphela kwenqaku) yahlelwa ngeFotohop. Umfanekiso okhokelela kwinqaku ngoku uvela kumthombo ongaziwayo.
Ndiqinisekile ukuba oku kuvuza kutyholwa akuyi kubhena kwabo bafuna iApple igcine i-3.5mm port yeefowuni. Umfanekiso onawo kule post uza kuthi, njengesiqhelo, ovela e-China. Njengoko ubona, kuyo ungabona ii-EarPods ezibukeka ngokufana nezo uTim Cook kunye nenkampani bayifakileyo kwibhokisi ye-iPhone ukusukela nge-iPhone 5 ngo-2012, kodwa enyanisweni ziya kuba zezinye Iindlebe zombane.
Ukuhamba ngaphandle kokuphikisana, iApple izakususa izibuko le-3.5mm kwaye singamamela kuphela umculo ngokuKhanyisa okanye nge-headset yeBluetooth, eya kuvumela i-iPhone 7 ukuba icekeceke (ngubani obuza kangaka?) kwaye ibandakanye isithethi sesibini ekufuneka siphucule isandi kakhulu. Ngokusengqiqweni, ukuba bayasusa i-3.5mm port, kufuneka babandakanye ii-headphone ezihambelana noqwalaselo olutsha.
Iindlebe zeNdlebe ziVuzile
Ukujonga umfanekiso akunakwenzeka ukuba bazi ukuba babandakanyile naluphi na olunye uphuculo. Amarhe ajikeleza ukuba iApple izakuquka ukunciphisa ingxolo, Kodwa okunokwenzeka ezo headphone ziyimodeli ekhethekileyo eya kuthi ithengwe ngokwahlukeneyo (ngexabiso elisezantsi, kunjalo). Singacinga ukuba iApple isebenzise inyani yokuba kuye kwafuneka benze i-Lightning EarPods ukubandakanya uphuculo lwangaphakathi, kodwa kubonakala ngathi kuphela kwento etshintshileyo kule modeli intsha yee-headphone kukuba batshintshe isinxibelelanisi se3.5mm Umbane.
Ingxoxo-mpikiswano yezibuko yolungiso lubuyile etafileni. Abasebenzisi abaninzi bacinga ukuba uTim Cook kunye nenkampani bajonge kuphela sithengisele iadaptha ukuze sisebenzise ii-headphone esele sinazo. Kwelinye icala, ishishini lesandi licinga ukuba intshukumo ayikho mbi njengoko ibonakala: the Abavelisi bee-headphone baya kunyanzelwa ukuba baphucule izixhobo zaboezinje ngomgangatho wesandi kunye nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo. Ndicinga ukuba ndiyavumelana nawo omabini la maqela kwaye ndicinga ukuba kungangcono ukuba iApple ibandakanye isixhobo sokudibanisa kwibhokisi ye-iPhone 7, kodwa ndicinga ukuba yinto esingazukuyibona xa kuziswa i-iPhone elandelayo ngo-Septemba. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ngaba ezi iya kuba zii-Earpods zombane eziza kufika nge-iPhone 7? [Ihlaziyiwe]
UCarlos MX sitsho
Umfanekiso ophethe isithuba nawo awubuxoki, lowo ukwitafile emdaka. Ezo earpods azinayo indawo apho imakrofoni ikhoyo kunye nevolumu +, ivolumu -.
Ukuba kunjalo, njengoko besitsho, kwi-iPhone, kufuneka babenayo loo nxalenye.
Phendula uCarlos MX
Bafumanisa indlela evumela ukubethela imifanekiso kunye nevidiyo zeMessage
I-IP SE kunye no-9.7 "Ukusondela kwe-Pro Pro: Ivenkile ye-Apple ivaliwe